Taliyihii Sirdoonka Alshabaab oo loo magacaabay Taliyaha Sirdoonka Somalia!!! – Hornafrik Media Network
Taliyihii Sirdoonka Alshabaab oo loo magacaabay Taliyaha Sirdoonka Somalia!!!
By HornAfrik	 Last updated Jun 19, 2017
Waxaa labadii maalmood ee la soo dhaafay soo xoogeysanayay warar sheegayay in Zakariye Ismaaciil Xirsi loo magacaabay Taliyaha Qeybta Sirdoonka ee Hey’adda Nabasugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA.
Ilo kala duwan ayaa sheegaya in Zakariye Ismaaciil loo magacaabay xilkaas, isagoo lagu bedelay C/fataax Ziidii oo Xilkaasi horay u hayay. Waxayna wararku intaasi ku darayaan in Zakariye uu si rasmi ah ula wareegay Xilka.
Baraha Bulshada ayaa magacaabidan siyaabo kala duwan looga hadlayay, inkastoo aan la shaacin, hase ahaatee waxay u badan tahay in magacaabidiisa aheyd mid hoose.
Taliska Qeybta Sirdoonka ee Hay’adda NISA ayaa waxaa hoos-taga Hoggaanka Baarista, Hoggaanka Macluumaanka iyo Hoggaanka Gobolada. Waana Qaybta ugu muhiimsan ee halbawlaha u ah Hawlaha NISA. iyadoona sidoo kale qaybtan ay la macaamisho Sirdoonadda Reer Galbeedka iyo kuwa Gobalka oo ay kala dhaxayso Wada Shaqayn iyo Xog Is Dhaafsi.
Zakariye Ismaaciil oo soo noqday Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab ayaa sanado ka hor isku soo dhiibay dowladda Federaalka, wuxuu ahaa sarkaalkii ugu heerka sareeyay ee AlShabaab ka soo goosta ee isu dhiiba dowladda.
Mr Zakariye ayaa xilli ka mid ahaa shaqsiyaadka loogu doon doonista badnaa Adduunka, isagoo madaxiisa uu Mareykanka dul saaray lacag dhan 3-milyan, balse markii dambe laga saaray liiskaas, markii uu ka baxay Ururka Al-Shabaab.
Dowladda Federaalka ayaa dhowaan is bedelo ku sameysay Hoggaanka Guud ee Hey’adda NISA, iyadoo Taliye cusub iyo Taliye kuxigeeno la magacaabay, balse waxaa is casilay Taliye kuxigeenkii Howl galada ee NISA.
Magacaabista Zakariye waxay Dad badan sii saadaalinayaan inay sababi karto in Sirdoonka Somalia ay waayaan Xogihii ay ka heli jireen Dhigooda. Maadaama ay Sirdoonadda ugu muhiimsanaa ee Somalia la wadaagi jiray Macluumaadka ay durba shaki ka muujiyeen in loo Magacaabo Taliyihii Sirdoonka Alshabaab, Taliyaha Sirdoonka NISA.
Baasaboorka Somalia oo helay Aqoonsi Heer Caalami ah.
Raiisul Wasaare daqiiqadaha aad ku sameyneyso xayeysiisku waxa ay ka go’an tahay waqtigaaga siyaasadda ee kooban.